कांग्रेस महाधिवेशन : महामन्त्रीमा मीनेन्द्र रिजालको सशक्त दावेदारी, प्रतिस्पर्धी कोको ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
कांग्रेस महाधिवेशन : महामन्त्रीमा मीनेन्द्र रिजालको सशक्त दावेदारी, प्रतिस्पर्धी कोको ?
२०७७ भाद्र २०, शनिबार ०५:५६:००
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा मीनेन्द्र रिजाल एक सशक्त दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने रिजालको तयारी छ । उनको तयारीलाई लिएर कांग्रेसमा भित्रभित्र ठूलै हलचल पैदा गरेको छ ।
स्पष्टवक्ता र स्वच्छ छविका रिजाल कांग्रेसका सीमित विद्वान् नेतामा पर्छन् । पश्चिमा विश्वविद्यालयबाट उदार राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्थामा दीक्षित रिजाल विद्यार्थीकालदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विचारधारामा एकाकार हुँदै आएका हुन् ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार मन्त्री एवं प्रवक्ताको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका उनी अहिलेसम्म निष्कलंक नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
रिजालले हालै सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा एवं नेपालमाथि भारतीय थिचोमिचोका विषयमा भारतीय मिडियामार्फत् दिएको वक्तव्य निकै चर्चित भएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, अस्मिता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली नेताले विदेशी मिडियामार्फत् स्पष्ट अडान यसरी सार्वजनिक गरेको बिरलै देख्न पाइन्छ । भारतीय मिडियामा छाएका केही मौखिक पत्रकारले गलत तथ्य र अफवाहपूर्ण प्रस्तुति दिँदा रिजालले ठाडै हकारेका थिए ।
कूटनीतिक वृत्तमा पनि ओजनदार नेताका रुपमा लिइने नेता रिजाल कांग्रेसको संगठनमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् । कतिपय मञ्चमा उनी पार्टीगत अडान र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हित र चिन्तनलाई सर्वोपरि राखेर प्रस्तुत भएका छन् ।
खासगरी शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणका सिलसिलामा उनले यस खालको भूमिका खेलेका कारण अरु पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि एक विश्वसनीय र गम्भीर नेताका रुपमा रिजाललाई लिएको पाइन्छ ।
गएको निर्वाचनमा मोरङ—२, जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्षेत्र थियो, बाट निर्वाचित भएपछि रिजालको उचाइ झनै बढेको छ । उनको यस विजयलाई भावी नेतृत्वका रुपमा रिजाललाई जनताले अनुमोदन गरेको रुपमा लिइएको छ । लामो समय हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट रहेर काम गरेका रिजाल गएको महाधिवेशनपछि अर्को खेमामा उभिएका थिए । खासगरी देउवाका वरिपरि गलत तत्वले घेराबन्दी गरेपछि रिजाल टाढिएका थिए ।
देउवाका नाममा पार्टी, सत्ता र स्रोतमा हालीमुहाली गर्नेमध्येका एक प्रकाशशरण महत हुन्, जसले यस खेमालाई बदमानीबाहेक केही दिएको छैन । २०६१ सालमा इराकमा १२ नेपालीको नरसंहार हुँदा उनले कूटनीतिक र अरु प्रकारका पहलकदमी नलिँदा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।
उत्तेजित भीडले काठमाडौँमा व्यापक आगजनी र विध्वंश मच्चाएको थियो । त्यतिखेर उनी परराष्ट्र राज्यमन्त्री थिए । उनले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेका भए धेरै क्षति रोक्न सकिने थियो ।
त्यसपछि २०६७ सालमा प्रकाशशरण ऊर्जामन्त्री भए । छोटो समय मन्त्री भए पनि सबैभन्दा बदनामी यहीबेला कमाए । दिनमा १—२ घण्टा हुँदै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु त कहाँ हो कहाँ, अरु ८ घण्टा बढाएर सारा नेपालीलाई अन्धकार युगमा प्रवेश गराए ।
अझ उनले जनतालाई अँध्यारोमा राखेर सीमित समूहलाई पोस्ने व्यापार नै गरेको आरोप उनी निकटस्थहरु लगाउँछन् । उनको सम्पत्ति र कारोबारको छानबिन गर्ने हो भने पनि यसको धेरै पोल खुल्नेछ । उनका नातेदार एवं त्यतिखेर उनको निकट रहेर काम गर्ने कर्मचारी र कार्यकर्ताको सम्पत्ति तथा कारोबारको विश्लेषण गर्दा पनि ती बदमासीको फेहरिस्त निकाल्न सकिनेछ ।
प्रकाशशरणसँग आमजनता एवं कांग्रेस कार्यकर्ताले किन पनि हिसाब माग्न जरुरी छ भने नेपाली जनतालाई १२ वर्ष अँध्यारोमा राखिएकोमा पूर्वऊर्जामन्त्रीका रुपमा अहिलेसम्म माफी मागेका छैनन् । कसको स्वार्थ वा नालायकीले यो अवस्था आएको हो भनेर पनि यथार्थ बताएका छैनन् ।
वास्तवमा शेरबहादुर देउवालाई असफल र बदनाम बनाउने पनि प्रकाशशरण र उनीजस्तैको एक समूह छ । यो समूह रहेसम्म न कांग्रेस उँभो लाग्नेछ, न त देउवाको बचेखुचेको साख जोगिनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा भारतीय नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्ने, उल्टै भारतीय पक्षकै पक्षपोषण गर्ने प्रकाशशरणलाई नेपाली जनता एवं कांग्रेसीजनले राम्रैसँग चिनिसकेका छन् ।
प्रकाशशरणका दाइ रामशरणले प्राप्त गरेको अस्वाभाविक सम्पन्नताको पनि स्वस्थता जाँच हुनुपर्ने आवाज त्यागी कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले उठाइरहेका छन् । यो मुद्दा आगामी महाधिवेशनमा पनि उठ्ने भएको छ ।
किनभने, कांग्रेसको भर्याङ चढेर पद र शक्ति प्राप्त गर्ने तर कांग्रेसलाई फर्केर कहिल्यै नहेर्ने, कार्यकर्तासँग बोल्नुपरे झिँजो मान्ने अनि व्यक्तिगत शानसौकत प्रदर्शनमै रमाउने जमातप्रति पार्टीको ठूलै पंक्ति रुष्ट र विरक्त छ ।
देश गरीब बन्दै जाने, विद्यार्थी भविष्य खोज्न अमेरिका र अस्ट्रेलिया जानुपर्ने, जनता एक छाक टार्न मलेसिया र खाडीका मरुभूमि ५० डीग्रीमा हाडछाला घोट्नुपर्ने अनि विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीका रुपमा यही देशका रामशरणहरु तक्मा थाप्ने ? यसको तालमेल कहाँ मिल्छ ? यसकारण अब रामशरण र प्रकाशशरणहरुका दिन गए भनेर कार्यकर्ताहरुले भनिरहेका छन् ।
त्यसो त विमलेन्द्र निधि र शेखर कोइराला सभापतिमा लड्ने हो भने यीमध्ये एकजनाले गगन थापालाई महामन्त्री उठाउन सक्नेछन् । सके सहमतिमा, नभए गगनलाई टक्कर दिन सक्ने गरी रिजाललाई आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीका रुपमा अघि सारिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै छ ।
खासगरी कोइराला खेमाबाट रिजाल अगाडि आउनेछन् । व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि र कार्यकुशलता सबै हेर्दा भविष्यमा कांग्रेस हाँक्न सक्ने पूरापूर योग्यता रिजालले हासिल गरिसकेका छन् ।
अब पुस्तान्तरण र पुनर्जागरणसँगै कांग्रेसमा अब विचारमा प्रस्टता, व्यक्तित्वमा स्वस्थतालाई पनि मुद्दा बनाइनुपर्छ ।
यस मुद्दालाई स्थापित गराउन सके मीनेन्द्र रिजालहरुले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्नेछन् । होइन भने देउवा र कोइराला परिवारको वरिपरि रहेर सधैँ तर मार्न पल्केको सीमित समूह मात्रै मालामाल हुनेछ । कांग्रेस दिन प्रतिदिन रसातलमा भासिनेछ ।